Jaceyl Cajiib ah oo dhexmarey Wiil iyo duq da’ahaan ku 3 jibaaran | Radio Danan (DBN) 94 FM
Home / QORMOOYIN / Jaceyl Cajiib ah oo dhexmarey Wiil iyo duq da’ahaan ku 3 jibaaran
Jaceyl Cajiib ah oo dhexmarey Wiil iyo duq da’ahaan ku 3 jibaaran
Posted by: Warqabad in QORMOOYIN June 7, 2014	Comments Off on Jaceyl Cajiib ah oo dhexmarey Wiil iyo duq da’ahaan ku 3 jibaaran
Wiil dhalinyaro ah ayaa dooqiisa xulashada dumarka noqotay in uu ka helo Jaceyl waali ahna u qaado dumarka da’dooda aadka u waynaatay ama dhaafay da’da dhalmada.
Wilkaan oo lagu magacaabo Kyle Jones asal ahaan ka soo jeeda Augusta, Georgia, USA, ayaa xiriir jeceyl wuxuu kala dhexeeyaa hawayneey imanka ah abuulan (ilmaha ay dhashay ilmaha ay sii dhaleen ), Islaantan ayaa jirto da’ahaan 91 sano halka wiilka ay xiriirka ee la leedahay ay ka wayntahay 60 sano.
Ayeeyadaan ayaa lagu magacaabaa Marjorie McCool oo inta badan dadka ugu wacaan Marge, ayaa shantii sano ugu danbeesay xiriir aad u wanaagsan oo Jaceyl kala dhaxeeyay wiilka 31 sano jirka ah.
Waayeeshaan ayaa leh 6 wiilal ah intoodaba kawada wayn wiilka ay xiriirka la leedahay ee lagu magacaabo Kyle Jones, lixda wiil ay dhashay ayaa kala jiro da’ahaan 71, 63, 61, 52 iyo 50.
”Hadii ay igu arkaan wiilashayda sidaa uma siidaneeyaan Kyle marmarka qaar waxay u qaataan in aan u ahay ayeeyo oo kale, mana kala kulma wax dhib ah wiilasha aan dhalay, Kyle ” ayey tiri Islaantaan waayeesha ah
Kyle oo hada dagan magaalada Pittsburgh, Pennsylvania ayaa sheegay in markii uu jiray 18 sano in uu jeclaa in uu la hasaawo dumarka da’dooda ay ka wayntahay 50ka sano.
Wiilkan Jaceylka waalan haleelay ayaa baray saaxiibta 91 sano jirta ah hooyadiis, Kyle ayaa sheegay in markii uu galo website yada arimaha bulshada siiba kuwa wax laga shukaansado markii uu raadinayo wuxuu raadin jiray dumarka da’dooda u dhexeeso 60-80 sano.
Kyle ayaa sheegay marka uu baranayo dumarka da’dooda aad u wayntahay ay ku yiraahdaan aad baan u yarahay wali.
Marjorie McCool ayaa sheektay in ay aad ugu maseerto asxaabtiisa gabdhaha ah balsa markasta uu gacaliyaheyga Kyle igu qanciyo in aan aniga ka wada wato waxaas oo dumar ama uu asxaab la yahay.
laakiin walaaca heesta Kyle ayaa ah in uu aamisan yahay saaxiibta uu jecel yahay ee lagu magacaabo Marjorie McCool ay ka hor dhiman doonto maa daama ay gashay xadka loo saadaaliyo dadka dhanka geerida waa sida uu hadalka u yiri Kyle.
Kyle iyo Marjorie McCool ayaa iska bartay qadka, kulankoodii ugu horeeyay wuxuu dhacay sanadkii 2009ka isaga oo kula kulmay dukaan lagu iibiyo buugaagta oo ay halkaas iyada ka shaqeyn jirtay.
Previous: Howlgalo ballaaran oo ka qabsoomay qeybo ka tirsan Caasimadda
Next: Madaxweyne Xasan oo Warqadaha Aqoonsiga kala wareegay Safiir cusub oo Soomaaliya loo soo Magacaabay